Mihetsika Ny Japoney: Ireo Tantaram-piainan’ny Transmigration (Fifindrafindrana Toerana) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Jolay 2016 16:36 GMT
Vakio amin'ny teny Español, عربي, русский, Italiano, English
Pikantsary avy amin'ny Japanese on the Move: Life Stories of Transmigration (Mihetsika Ny Japoney: Ireo Tantaram-piainan'ny Transmigration)
Raha toa ianao liana amin'ny fiteny, ny maha-izy azy ny tsirairay ary ny fifangaroanà kolontsaina ao anatinà tontolo natambatra ho iray, mety hahaliana anao ihany koa ny andian-tafatafa Japanese on the Move: Life Stories of Transmigration.
Asongadin'ilay tetikasa ety anaty aterineto ireo tafatafa dimampolo miditra lalina, samy nakarina ao amin'ny Youtube, niarahana tamin'ireo olona izay milaza fa samy tanindrazany na i Japàna na i Aostralia.
Fisaintsainana manokana momba ny dikan'ny hoe mifindrafindra sy mitoetra an-trano ary manana firenena roa (na maro) ho tanindrazana ny tantaran-dry zareo ireo:
Toy inona izany hoe miantso firenena roa ho tanindrazan'ny tena? Inona no mahatonga ny mpifindramonina hikisaka voalohany indrindra ary ahoana no fidiran'izy ireo ho ao anatin'ny fiarahamonina iray vaovao? Inona no manosika azy ireo hikisaka? Ny aiza no tena andrian'ny fon'izy ireo? Ao anatin'ny “Japanese on the Move: Life Stories of Transmigration” dia olontsotra dimampolo no mizara ny zavatra niainany. Manana fifamatorana manokana amin'i Japàna sy Aostralia izy ireo tsirairay avy, ary samy manana tantara hozaraina avokoa.
Avy amin'ny lafim-piainana rehetra ireo nitafàna.
Ao anatry lahatsary iray, Shingo Usami, mpilalao an-tsehatra ary Aostraliana mponina maharitra ao Sydney, Aostralia, dia manome fitantarana ivelan'ny sehatra ny fotoana nanombohany nilalao ny “samurai/ninja” to amin'ny TV.
Avy eo zarainy amintsika ny fandinihany ireo fanamby sy ny tombony amin'ny maha-Japoney mpilalao an-tsehatra azy avy aminà tontolo mampiasa ny Anglisy ho fiteny ofisialy faharoa ao Aostralia.
Ny tetikasa “Japanese on the Move” dia ampahany amin'ny Language on the Move, tranonkalam-pikarohana iray iarahan'ireo mpiteny ilay fiteny manokan-tena handinika ny fahaizana fiteny maro, ny fianarana ny fiteny ary ny fifandraisana ara-kolontsaina ao anatin'ny vanimpotoanan'ny fanontoloana sy ny fifindramonina.
Tsy voatery ho avy any Japàna daholo akory ireo 50 rehetra nitafàna ao anatin'ny tetikasa “Japanese on the Move.
Ao anatin'ity tafatafa ity, resahan'i Hossein Azimi injeniera momba ny resaka fitsaboana, avy any Iràka, amin'ny teny teny Japoney ny momba izay zavatra niainany hidirana tamin'ny fiarahamonina Japoney.
Na any Melbourne, Aostralia aza no monina izy ankehitriny, miaraka amin'ny vadiny teratany Britanikasy ny zanany lahy Aostraliana, milaza i Azimi fa i Japàna no akaiky kokoa ny fony, ary ny Japoney no kofehy mahazatra azy kokoa ifandraisana amin'ireo mpikambana telo ao anatn'ny ankohonany.
Toa an'i Azimi, maro tamin'ireo nitafàna no mamaritra zotram-piainana mahaliana sy saro-takarina izay nitondra azy ireo ho any Aostralia.
Nobuko Ishii, mpirotsaka an-tsitrapo iray monina amin'izao fotoana any Sydney, dia nandao an'i Japàna niaraka tamin'ny “tanjona manokana hamantatra ny tontolo.”
Niaina tany Hong Kong izy, toerana izay nahitàny ny vadiny Shinoa ary nanorenany tokantrano. Taorian'ny 20 taona tao Hong Kong ary talohan'ny famerenana an'i Hong Kong tamin'i Shina tamin'i 1997, nisafidy ny hifindra tao Aostralia izy sy ny ankohonany, toerna izay nonenany nanomboka hatreo.
Ireo tafa dimampolo nakarina ao amin'ny tranonkala “Japanese on the Move” dia manome tantaram-pijery manokana momba ny dikan'ny hoe fifangarana kolontsaina ao anatinà tontolo iray miaina ny fanontoloana. Afaka jerena eto ireo tafa dimampolo ireo.
Poa-tsatroka ho an'i Mohamed ElGohary.